Albacete - Chọpụta ebe kachasị ịtụnanya | Njem zuru oke
Albacete bụ obodo nke Castilla-La Mancha, na Spain. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa obodo, nke nwere tupu Roman foduru n'okpuru ụkwụ ya. Na-echezọghị na ọ bụ obodo kachasị ukwuu yana bụrụkwa nke ọtụtụ ndị bi na Castilla-La Mancha. Ọ hụla ihe omume akụkọ ihe mere eme dị mkpa n'ụdị agha ma ọ bụ ngosi ngosi nke a ka na-eme taa. Dị ka ọ dị na Albacete Fair, nke ekwuwapụtara maka Mmasị Njem Nleta Mba Nile.
N’agbanyeghi na mmalite esighi ya n’aka, ka oge na-aga, ọ ghọla isi obodo. Ya dị mkpa akụkọ ihe mere eme center na-ekewa n'ime ihe nketa, ebe katidral, ngosi ihe mgbe ochie na ihe nkiri bụ ụfọdụ nke njirimara akara na-pụta ìhè. Na-echezọghị na oge ezumike ahụ bụkwa ihe ọzọ amara nke ọma na Albacete.
N'ihi ọnọdụ ya, ọ nwere ọtụtụ njikọ ụgbọ njem na-eme ka ọ dịrị gị mfe iru ebe a pụrụ iche. N'etiti igwe nke obodo anyị na-egosipụta ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụgbọ elu, nke na-eduga ya ka ọ bụrụ otu n'ime ntọala kachasị mkpa na mpaghara Spanish niile.
Na Albacete anyị na-ahụ akụkụ nke ihe okike. N'ebe ahụ ka a mụrụ Osimiri Mundo n'etiti ọchịchị abụọ na ...
The desserts delicious na Albacete
por Absolut Albacete eme 9 afọ .
Obi abụọ adịghị ya na nke kachasị mma na mpaghara niile ... Anwala ịhapụ tebụl mgbe i risịrị nke ọ bụla ...